Ma Ku Fikirtay In Aad Barato Af- Ruushka..Xog Ayaan Kaaga Heynaa | Xaqiiqonews
Ma Ku Fikirtay In Aad Barato Af- Ruushka..Xog Ayaan Kaaga Heynaa
Hadii horay ugu fikireysay in aad barato luuqadda Ruushka, waxaa muhiim ah in aad bilowdo gaar ahaan waqtiyada maamuuska u leh iyaga, sida shalay oo kale oo ku beegneyd maalinta Luuqadda Ruushka
Luuqadda Ruushka ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah luuqadaha loogu hadal badan yahay gudaha Yurub, waxaana ku hadla in ka badan Boqol afartan iyo labo milyan oo qof kuwaasi oo dagan wadanka aduunka ugu weyn.
Af-ruushka ayaa ka mid ah afafka la isku yiraahdo Indo-European ee asalkooda yahay Hindiya, kuwaasi oo marka Yurub la joogo isku noqanaya Slavic group of languages waxaana ka mid ah afafkaasi luuqadaha looga hadlo Czech, Slovak, Polish iyo Serbia.
Qeybta hoose waxaa ku qoran qodobo dhowr ah oo muhiim ku ah in aad ka ogaato Af-ruushka.
-Barashada Af-Ruushka waxa ay muhiim tahay qofka doonaya in uu maalin un noqdo Cirbixiyeen maxaa yeelay Moscow waxaa ku yaalla mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee lagu bixiyo tababarka Cirbixiyeenada.
-Kalimadda Ruushka ee злой waxa ay leedahay hal dhawaaq oo kaliya oo ah (IZlooy) micnaheeduna waa (Shar/Xumaan).
-Waxyaabaha Cajiibka ee laga yaabo in ay ku soo jiitaan waxa ka mid ah erayga afka ruushka ee спаси бог
oo u dhawaaqaya (Isbaa sii boh) kaasi oo nacnihiisu yahay “Nabadeey” ayaa marka la tarjumo erayada uu ka gooban yahay waxa ay noqonayaan (Ilaah ha ku xafido), cajiib labo qof walbo oo ruush marka ay kala tagayaan waxaa is yiraahdaan erayadan, adiga ma xasuusan san tahay goortii kugu dambeysay ee qof deriskaada ama isku shaqo aad tihiin aad ku tiraahdo (Alle ha ku xafido).